လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ပေါင်း 1 အပတ်က #157 by PAYSON
Kudos (နှင့်ငါအဓိပ္ပာယ်များ၏တင်းကျပ်အတွက်ဆိုလို) ကို BT-67 ၏တည်ဆောက်ရန်! ပျံသန်းဖို့စူပါကောင်းတဲ့ယာဉ်။ ကျွန်မ C-47 (သို့မဟုတ် DC-3) ၏ကြီးမားသောပန်ကာဖူး (ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကတည်းက) အမြဲဖြစ်ခဲ့သည်။ Rikooo အတွက်ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ် လာ. လူအပေါင်းတို့သည်လက်ျာဘက်နည်းလမ်းတွေနဲ့ပြုပြင်လိုက်ပါကရှာတွေ့စေရန်။ တကယ်တော့ငါ့အဆင်းသက်ချရတယ်အလုံအလောက်တိုတို, ငါရွေ့လျားနေသောလေယာဉ်တင်သင်္ဘောပေါ်ဆင်းသက်မှာပါပေးစဉ်းစားထား။ ဝန်ပေါ့ရန်မေ့နေပေမယ့်မှီဝဲ။ အဆိုပါချွတ်ယူအပြည့်အဝကုန်းပတ်ပြန်တွန်းနှင့်ကဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ငါက၏ screenshots များတယ်သို့သော်သူတို့ကိုဤအရပ်၌ load မှမရနိုင်ပါ။
Rikooo, သင်ယောက်ျားတွေတချို့တော်တော်ကောင်းတဲ့တင်သင်္ဘောလေယာဉ်ရှိသည်။ ငါ A1 Skyraider အတွက်ချင်ပါတယ် FSX။ 2004 အတွက်တဦးတည်းရှိပါသည်။ သင်တို့ရှိသမျှသည် "ဟုအဆိုပါကောင်းသောအလုပ်တက်စောင့်ရှောက်" ... သင်ပြောပြမှငါ့ကိုမလိုအပ်ပါဘူး။ ဒါဟာကအနည်းဆုံးသင့်ရဲ့ 2nd သဘာဝဖြစ်ဟန်ရှိသည်။
လေးစားစွာဖြင့် PAYSON / Keith
လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ပေါင်း 1 အပတ်က #170 by Gh0stRider203
ya သောဤ Dang site ကိုအတူ ONE ပြဿနာရဲ့ .... သိပါ ...... ဒါကြောင့်သာ ^ _ ^ အရမ်းရယ်ရတယ်စွဲဖြစ်လာဖို့ ONE ငှက်ကြာ
အဆိုပါ screenshots များ ..... အသုံးပြုရန်အဖြစ် prnt.sc/ ငါခဏတစ်ဘို့အကြှနျုပျ၏အ screenshots များရရှိရန်ကြောင်းကိုအသုံးပြုပါတယ်။ သငျသညျထိုအရပ်၌လည်းပေါ်ကိုညာဘက်သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကနေပစ္စည်းပစ္စယ upload တင်လို့ရပါတယ်
လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ပေါင်း 1 အပတ်က #179 by Dariussssss
ရုံ Gh0st ကဲ့သို့သင်တို့အရှိဆုံးအပြုသဘောဆောင်တဲ့လမ်းအတွက်, ဤအရပျစွဲရနိုင်ကပြောသည်။
လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ပေါင်း 1 အပတ်က - လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ပေါင်း 1 အပတ်က #180 by Gh0stRider203
ငါဒါဟာအကြီးမားဆုံးပြဿနာ lmao ငါကဒီမှာချွတ်ရလေယာဉ်ကိုခံစားဖို့အချိန် TIME ရှာဖွေတာဖြစ်ပါတယ်
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, XRAY အရမ်းရယ်ရတယ်အကြှနျုပျ၏ erm ခြောက်လ, မိုင်ပညာရှိသစီးနင်းနေသည်
ဒါက said..all ဒီ 100LCF နှင့် 744F သုံးပြီး 748% ငါ့ကိုဖြစ်ပါသည်
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်:3နှစ်ပေါင်း 1 တပတ်အကြာအားဖြင့် Gh0stRider203.